Ziziphi izixhobo zesoftware ezikwazi ukufikelela kwi-Intanethi ye-Amazon yokusesha ukuSebenza ngendlela engcono kakhulu?
Ngaphambi kokuba nantoni na enye, into enzima kakhulu kwi-Amazon kukuba kufuneka uqonde iimfuno zangempela, iimfuno kunye neenjongo zabathengi bakho abanokukwazi ukuguqulwa ngokuzenzekelayo zibe ngabathengi bamanani ababenokuthenga ngokuphindaphindiweyo kunye nomnye umntu. Kodwa akuyona into elula kuyo yonke into, ngokuyininzi kuba umthengisi-ntanethi kunye nomthengisi wexesha elikhulu e-Amazon sele sele enezinto ezininzi zokwenza kunye nemibandela eninzi ebaluleke kakhulu ekufuneka ibanjwe kuqala. Kodwa ngenhlanhla kukho izixhobo ezininzi ezintle ezikhoyo kwimarike ukuba ufumane uncediso lwe-Amazon Search Engine Optimization.
Kodwa ngaphambi kokukubonisa iisethi zam izixhobo ezibonakalayo kunye nezikhokelo ezixhasayo zentanethi, masijongane nayo - I-Amazon Search Engine Optimisation ngokuyinhloko ijikeleze malunga neenkcukacha eziphambili ezijoliswe kuyo, ngokunjalo njengoluhlu lwazo olufanelekileyo kwiindawo eziphambili zoluhlu lwemveliso yakho. Yingakho ngaphantsi ndiza kugxininisa kwi-Intanethi ye-Amazon Search Engine ukulungiselela ukusetyenziswa kwamagama angundoqo kunye nemigca yokukhangela imilenze ende, ixhaswe nezixhobo ezintle ezintle ukukwenza izinto zibe lula (ubuncinane ezo zihambelana nophando olunzulu lwegama eliphambili lokukhuphisana - ngokugqithiseleyo, inokusingathwa ngokukhawuleza kwaye ikhululekile-eqinisweni, enikwe ukuba uncediswe ngumncedisi ongcono kwi-intanethi).
Injini yeeNzuliso ze-Amazon Ukulungiswa kwamagama angundoqo
1. Amazwi omthengisi - aphakathi kwezona zixhobo ezikhethiweyo ze-Amazon Search Engine Optimization, ngokukodwa xa kuziwa kutshintsho lwegama eliphambili elijoliswe kumncintiswano onokukhuphisana kunye nokuba lunokuwunqoba ukudibanisa umsila omude.Kwaye kulula kakhulu ukuvelisa iitoni zegama eliphambili legama elibalulekileyo kwinqanaba lakho lemveliso okanye into ethile ethile enokuyithengisa ngaphezu kwayo. Kuthetha ukuba iMarchant Words ingaba isisombululo esihle kulabo bathengisi be-novice abafuna i-point yokuqala eyiyo kunye ne-Amazon Search Engine Ukulungiswa kwamagama abalulekileyo.
2. Igama elibalulekileyo iDominator - lelinye isixhobo esihle ukuba usebenzise kwisicwangciso sakho sonke kwi-Amazon Search Engine Optimization. Nangona ufikelelo lobomi beli thuluzi lonke lihlawuliswa malunga needola ezingama-50, ngaphezu kwewaka elineshumi elinesihlanu lama-abasebenzisi abamileyo sele beqinisekisile uluhlu lwazo olubanzi. Phakathi kwezinye izinto, i-Keyword Domator toolkit inezixhobo ezintathu ezihlukeneyo ezikhuselekileyo ezinokukunceda ngendlela yazo. Jonga nje nge-Google Autocomplete yegama elingundoqo elingundoqo (iifayili zamahhala ekhethekileyo efanelwe ukuchonga yonke inhlanganisela yegama eliphambili elijongene ne-market niche / umkhiqizo wekhredithi - ithathwa ngokuthe ngqo kwi-Google SERPs), iThuluzi legama elingundoqo le-YouTube (linika iziphakamiso zegama elibalulekileyo elide elide. oko kuya kuba luncedo kakhulu kubanini bezo shishini abonakalisa iphrofayili exhasa inkxaso okanye iseshishini lokuthengisa kwiwebhusayithi yesibini evakatyeweyo yewebhu), kunye ne-Amazon Keyword Tool (kukunika ukufikelela ngokuthe ngqo kwi-database engundoqo yegama elingundoqo elibandakanya izigidi zokukhangela kweemveliso ezicetywayo eziceliwe abathengi abaphila ngokuthenga imihla ngemihla kwi-Amazon online marketplace) Source .